कृषि, प्रबिधि र लकडाउन – कृषक र प्रविधि
कृषि, प्रबिधि र लकडाउन
दिपेश ढकाल :
बिश्व यदि बेला कोरोना भाइरस (कोभिड-19)ले गर्दा लकडाउनमा छ। उसो त नेपालीहरुको मुख्य पेशा भयकै कारण दैनिक व्यवसाय गरिरहेका तथा व्यवसायिक रुपमा कृषि खेती अंगालेका ब्यक्ति तथा युवाहरु पछिल्लो समयमा धेरै संख्यामा छन । यो लक डाउनले गर्दा व्यवसायिक किसान बढि मारमा छन, लगानी मेहनत तथा प्रबिधि सङ जोडिएको कारण उत्पादन भयपनि उचित समयमा मुल्य तथा बजार नपाएर धेरै नै घाटा हुन्छ अहिले तेसै भैरहेको छ ।
कृषि सङै प्रबिधि पनि विभिन्न NGO,INGO लागि परिरहेका छन । विभिन्न क्षेत्रमा कृषि प्राबिधिक पुगि परिक्षण,कृषि ज्ञान प्रशारण गरिरहेका छन तर लकडाउन सङै प्रबिधिहरु सङ जोडिएका काम भने फोनको भरमा छन परिक्षण,प्रशारण, रोगकिरा प्रकोप आदि। जसको कारण निश्चित समय ,उपयुक्त तरिका नमिली सहि परिमाण आउँछ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
#अबको समय सिजनमा समस्या
यति बेला सिजन अनुसार काक्रा, करेला ,लौका,टमाटर वारि लटरम्म छन केही रोपिने समय पनि हो ,भने धानको बीउ राख्ने समय पनि हो! कृषि सङै प्रबिधि जोडिएकै कारण प्रबिधिका सामान किन्न जाने लकडाउनका कारण समस्या भैरहेको यदि पुगियो भने पनि केही पसल कृषि एग्रोभेट बन्द तथा धेरै जसो सामान सकियको छ ।
नेपालमा बीउ उत्पादन गर्ने निकाय सिमित मात्रामा छन भने बाहिरी देश बाट आउने बीउको माग उत्पादनको हिसाबले बढिनै छ । फलस्वरूप लकडाउनले आयातमा समस्या भै नेपाली बीउहरु पनि किसान सम्म पुग्ने होकि हैन भन्ने चिन्ता पनि छ ।
यति मात्रै होइन किसानले तरकारी वारिमा गरिरहेका प्रबिधि अन्तर्गत प्लास्टिक मल्चिङ,थाक्रा दिन प्रयोग गरिने डोरि, भिटामिन, मलखाद तथा बिषादीहरु नपाईने समस्याले रोगकिराको प्रकोप आदि समस्याले किसानले अबको सिजनमा कसरी खेती गर्ने तथा गर्ने कि नगर्ने भन्ने पक्षमा किसानहरु छन ! यी कुरामा सम्बन्धित निकायहरुले समयमै ध्यान दिन जरुरत छ ।
हातले नछोइकन निस्किन्छ साबुन, सेनिटाजर र पानी